Chelsea Oo Sameeneysa Qorshe Fudud Oo Ay Ku Soo Qaadaneyso Haaland
HomeWararka Ciyaaraha MaantaChelsea oo Sameeneysa Qorshe Fudud oo ay ku soo Qaadaneyso Haaland
Kooxda chelsea ayaa lagu soo waramayaa in ay isku diyaarinayso in muhiimad ay saarto Mino Raiola si ay u horumariso fursadaheeda saxiixa Erling Braut Haaland xagaagan.
Weeraryahanka Borussia Dortmund waa mid ka mid ah xidiga ugu fiican ee suuqa kala iibsiga haatan, Chelsea ayaa ka mid ah dhowr quwadood oo reer Yurub ah oo la filayo inay kula dagaallamaan saxiixiisa xagaaga.
Haaland waxaa wakiil u ah aabihiis Alf-Inge Haaland iyo wakiilka caanka ah ee Raiola, oo xiriir aad u qoto dheer la leh Blues, laakiin kooxda ayaa la filayaa inay rajeyneyso inay ka tagto waayihii la soo dhaafay iyagoo raadinaya inay booska ka saaraan koox ka mid ah kooxaha ay xafiiltamaan.
Sida laga soo xigtay The Athletic , madaxa kooxda Chelsea Marina Granovskaia ayaa ka shaqeyneysa sidii ay xiriir dhow ula yeelan laheyd Raiola isla markaana ay rajeyneyso inay wanaajiso xiriirka labada dhinac, inkastoo taasi aysan damaanad qaadi doonin u dhaqaaqista Stamford Bridge ee Haaland.
Raiola ayaa kormeerayay heshiiska dheer ee Romelu Lukaku ee 2017, halkaasoo ciyaaryahankii hore ee Chelsea la fahamsan yahay inuu qarka u saaran yahay inuu ku laabto caasimada ka hor inta uusan dhameystirin ku biiritaankiisa daqiiqadii ugu dambeysay ee Manchester United , taasoo la sheegay inay ka careysiisay Blues.
Manchester City iyo Manchester United ayaa ah labada koox ee kale ee Premier League ee loo maleynayo inay ku tartamayaan Haaland, laakiin kuwa dambe ayaa sidoo kale laga cabsi qabaa inay saameyn ku yeeshaan Raiola wadahadalada.